“नेपालमा जलविद्युत्को अध्ययन र अनुसन्धान नै कमजोर छ” « News of Nepal
प्राडा, नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी
नेपालमा भइरहेका ऊर्जा विकासका कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित देखिँदैनन् । राज्यका उच्च तहमा बसेका कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वदेखि देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जहिले पनि ऊर्जा विकासका कुराहरू गर्ने गरेको सुनिन्छ। तर, कति हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने हो भन्ने तथ्य र तथ्याङ्कको बारेमा जिम्मेवारी पदमा बसेकाहरू खासै जानकार हुँदैनन् । वर्षौंदेखि निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनका लागि एकदमै ठूलो कोसिस गर्नुपरेको छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू विभिन्न समस्याका कारणले गर्दा समयभित्र नै निर्माण हुँदैनन्। समस्या पहिचान गरेर त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन। विश्वमै जलस्रोतको धनी देश भनेर नेपाललाई चिनिने गरेको छ। जलस्रोतमार्फत नेपालले धेरै विकास गर्नसक्ने भएपनि अहिलेसम्म सही सदुपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जुन मात्रामा हामीले जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन।
नेपालमा नारा र भाषणको विषयले मात्र जलविद्युत्को विकास गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। तर, नेपालले अहिले पनि भारतसँग विद्युत् आपूर्ति गरिरहनुपरेको छ। योजनाबद्धरूपमा जलविद्युत्को विकास हुन सकिरहेको छैन। सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अर्कातिर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स लिने र समयमा नै निर्माण नगर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डा. कृष्णकान्त पन्थीसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीः
नेपालमा विद्युत्को सम्भावना राम्रो रहेपनि अपेक्षाकृतरूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन नि किन होला ?
कुनै पनि काम गर्दा स्पष्ट नीति र योजना चाहिन्छ। काम गर्दा वा योजना अगाडि सार्दा त्यसको बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान र अध्ययन गनुपर्छ। तर नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि बढी भाषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। एउटा लहरको भरमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीले समेत बोल्ने प्रचलन छ। हामी विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएर पनि जलस्रोतलाई जसरी हामीले ऊर्जाको विकासमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौं त्यसरी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीले जुन मात्रामा विद्युत्् उत्पादन गर्न सक्थ्यौं त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं। यसका लागि हुनुपर्नेजति योजनाहरू बन्न र अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्।
नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी देशमा पर्छ भनेर हामी दाबी गर्ने गर्छै। जलविद्युत्बाटै देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना पनि बनाएको छ। अझ पछिल्लो समय त जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लिनका लागि पनि तछामछाड हुने गरेको छ। यसरी उत्साहित जनताका माझमा उत्पादन गर्ने कुरा पनि चलिरहेका छन्। यसरी उत्पादनको कुरा गर्दै गर्दा कति अनुसन्धानमा आधारित कुराहरू भइराखेका छन्?
अब जनताको जीवनस्तरलाई नियालेर हेर्ने हो भने जुन हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा छ, त्यो एकदमै राम्रो हो। किनकी हाम्रो आफ्नै घरेलु स्रोतशक्तिबाट जति धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यति नै धेरै फाइदा हुने पक्का छ। किनकि नेपालीले आफैंले लगानी गरेको ठाउँमा आफैंले काम गर्छ । यसो गर्दा विदेशबाट हामीले जनशक्ति मगाउनु पर्दैन। यसले गर्दा जनताले लगानी गर्नु धेरै नै राम्रो हो। तर, जनताको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा भने मुख्य हो। जलविद्युत्् आयोजना कठिन योजना हो। यसमा विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले यसमा धेरै नै ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ। यसमा अुनशासनको पनि महŒव हुन्छ। त्यसैले अनुशासित र राम्रो डिजाइन गरेर बनाइयो भने बल्ल जनताको लगानी सुरक्षित हुने हो। त्यतातिर राज्यको ध्यान अलिकति कम भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।
हाम्रा जलविद्युत् आयोजनालाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा यहाँले भन्नुभएकोजस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ?
धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना सुरुङ खनेर विकास गरिएको छ। तपाईं त नर्वेमा बसेर पढाउनुहुन्छ। त्यहाँ र नेपालको सुरुङ खन्ने प्रविधिमा के फरक छ?
अहिलेको विश्व धेरै नै सजिलो प्रविधिमा धकेलिएको छ। तर, सुरुङ बनाउँदा एकदमै अनुशासित कार्यबलको आवश्यकता पर्छ र त्यस अुनशासित कार्यलाई बाहिरबाट अनुशासित कार्यव्यवस्थापन चाहिन्छ। यसो गर्नेबित्तिकै नेपालीहरूले सुरुङ बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा मैले मान्दिन। त्यसैले सुरुङ बनाउन त्यति कठिन छैन । तर, सुरुङ कहाँ राख्ने कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराको अध्ययन भने निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जस्तो यो अनुसन्धानको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो मुलुकमा जति पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् त्यो सबै दाताले दिएको रकमले मात्रै रिसर्च गर्ने गरेका छौं। तर, हामी आफैंले लगानी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हुन सकेको छैन?
हाम्रो विश्वविद्यालयका जुन विषयमा जसरी रिसर्च हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन। तपाईंहरूजस्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले रिसर्च गराएर काम गर्ने नसक्ने त हैन होला। प्राध्यापकहरूले शुरूआत गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो देशको चरम राजनीतिक प्रभाव पनि विश्वविद्यालयमा परेको हो?
जस्तै म नर्वेजियन युनिभर्सिटी टेक्नोलोजीमा विद्यार्थी छु” । मलाई मेरो रिसर्चको चाहनाको विषय के हो भन्ने थाहा पनि छ। मैले मेरो चाहनाअनुरूपका रिसर्च प्रपोजलहरू बनाउँछु। त्यसपछि नर्वेजियन सरकारसँग, काउन्सिलहरूसँग सहकार्य गरेर प्रपोजल पठाउने गर्छु। त्यो प्रपोजल उनीहरूलाई मनप¥यो भने मैले मागेको पैसा विश्वविद्यालयलाई दिन्छन्। त्यसपछि त्यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा म र मेरो क्याम्पसको व्यवस्थापक बसेर सल्लाह गर्छांै। तर, नेपालको कुरा गर्दा यहाँ त्यस्तो किसिमको केही छैन्। नेपालका उद्योगहरूले खासै लगानी गरेको देखिँदैन। हामीले नेपालमा अझैपनि विकसित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं र उद्योग–उद्योगहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै हुन सकेको छैन।
हामीकहाँ फिटिक्कै रिसर्च काउन्सिल हुँदै नभएको हो कि भएकाहरूले काम गर्न तदारूकता नदेखाएका हुन्?
हैन, छन्। नेपाल विज्ञान प्रतिष्ठान छ । त्यहाँ सानातिना काम त हुन्छन्। तर, तिनीहरूलाई राज्यले बचाउने र जुन किसिमको अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो पटक्कै छैन्। यो एकदम सानो स्केलको छ र त्यसमा पनि राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ। तर पनि साना कामहरू त भइरहेका छन्।
रिसर्च खर्चिलो हुने भएर कठिन हुने गरेको हो कि, हाम्रो मस्तिष्कमा नै समस्या हो?
भनेपछि तपार्इंले भनेजस्तै जति धेरै रिसर्च भएर काम हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन?
हामी नेपाली जति पनि काबिल छौं, त्यस्ता खालका युवा विदेशी श्रमबजारमा बिक्छौं। तर, नेपालमै जन्मेका त्यस्ता काबिल व्यक्तिलाई स्वदेशमा ल्याएर काम गराउने हो भने त हाम्रो देशले लाभ प्राप्त गर्न सक्थ्यो होला नि?
नर्वेमा हुनुहुन्छ, फेरि नेपाल आएर काम गर्ने सोच छ कि?
प्रस्तुतिः मनोज रेग्मी